Akụkọ - Nanị ọgbakọ
Na 3:30 pm na August 7, 2020, anyị ụlọ ọrụ ẹkenịmde a nnukwu ngwaahịa nanị ogbako na etiti nke Yongkang n'isi ụlọ ọrụ. Werelọ ọrụ si na ngwaike ụlọ ọrụ na-kpọrọ òkù ka ha gaa ogbako. N'okpuru nkwadebe anyị ji nlezianya mee, ụlọ ọrụ anyị gosipụtara JH-168A 2200W igwe na-ekpochapu ọkụ, JH-4350AK igwe mgbada eletriki, JH-150 eletriki eletriki na ngwaahịa ndị ọzọ na ndị na-ege ntị.
N'ihe na-aga n'ihu n'ịrụ ọrụ na ihe ọhụrụ, nchọpụta ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị na mmepe na-agbaso usoro a, na-enyere aka ịkwalite, na -emepụta usoro ngwaahịa nke naanị Jiahao mere. N'otu oge ahụ, na imepụta ngwaahịa na imepụta ngwaahịa iji mee mmepe na mkpa dị mkpa. Karịsịa na ngwaahịa mmanụ, anyị na-aga n'ihu ịzụlite ụdị ọhụrụ, ọrụ nlezianya, ịdị mma, maka atụmatụ ire ahịa n'ọdịnihu, anyị na-enyekwa ndụmọdụ kwekọrọ na ya, ma na-eduzi usoro ahịa ngwaahịa n'ọdịnihu.
Maka mmepe n'ọdịnihu na atụmatụ mgbanwe nke Jiahao, ụlọ ọrụ anyị mekwara nkọwa zuru ezu. Na oge nsogbu onodu oria ojoo, anyi aghaghi igbanwe ma melite ma meputa uzo ohuru na uzo maka e-commerce. Naanị n'ụzọ a ka anyị nwere ike ịkekọrịta ahịa ahịa ahịa wee mata mmeri merie.
Onye ọ bụla nwere obi ụtọ ná nzukọ ahụ. Ndị ọrụ nọ na saịtị ahụ jiri ndidi kọwaa ma gosipụta ngwaahịa ọhụrụ, gụnyere ọdịdị ngwaahịa ahụ, otu esi arụ ọrụ nke ọma, yana nkọwa nkọwa, njirimara, ọrụ, wdg, nke mere na ndị franchise nwere ike ịnwe nghọta zuru oke banyere ngwaahịa ọ bụla ma kwenye atụmatụ ha na ahụmahụ.
Anyị na-atụ anya na site na ihe ngosi a, anyị nwere ike ịgafe ozi nke mmepe ụlọ ọrụ anyị n'ọdịnihu, ma mụtakwuo banyere ozi nzaghachi ahịa na ndị ahịa na-achọ ozi.